अष्ट्रेलियामा काम चाहियो ? यहाँ जानुहोस् ! - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | १७ आश्विन २०७३, सोमबार ०५:१६ |
मेलबर्न । अष्ट्रेलियाको जीवनशैली निकै महँगो छ । त्यसैले केही समय मात्र बेरोजगार हुनु भनेको पनि यहाँ निकै समस्याहरु निम्त्याउनु सरह मानिन्छ । तर भने जस्तो काम सजिलै पाउँन पनि मुस्किल छ । तर अलिकति प्रविधिसँग अभ्यस्त हुने र बोल्नसक्नेहरुका लागि भने यहाँ काम पाउँन त्यति गाह्रो पनि छैन । घरमै बसि बसि काम खोज्न सकिन्छ । त्यही पनि भने जस्तो तलब छ कि छैन भन्ने तय गरेर ।
किनभने अष्ट्रेलियामा काम र करिअर विकास खोज्नेका लागि धेरै रोजगारी वेबसाइट तथा वर्गीकृत वेबसाइटहरू छन् । ठूला कम्पनिहरूले प्रोफेसनल नेटवर्कको माध्यमबाट कामदारहरु माग गर्ने विधि अपनाउने गरेका छन् । त्यसैमध्यैको एक हो गमट्री (www.gumtree.com.au) । अष्ट्रेलियाको अनुभव नभएको र विद्यार्थी तथा अन्य भिसा भरखर आएकाहरूको लागि काम खोज्ने एउटा भरपर्दो माध्यम हो यो । यो वेबसाईटबाट अष्ट्रेलियामा आउँनु अघि नेपालमै बसेर यहा कस्तो काम, कति समयको लागि, कति पैसा कमाउने गरि पाउन सकिन्छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । यस्तै यहाँको घरभाडा र कोठाको उपलब्धता, सामानहरूको मूल्य बारेमा समेत यो अनलाइनमा जानकारी लिन सकिन्छ ।
यो अष्ट्रेलियामा निशुल्क काम खोज्न प्रयोग गरिने सबैभन्दा ठूलो र लोकप्रिय अनलाइन हो । यो अनलाइनबाट काम खोज्न वेवसाइटमा गएर जब्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्छ । जहाँ दैनिक हजारौं रोजगारीका अवसरबारे जानकारी पोष्ट गरिएको हुन्छ । त्यसैले आफूले खोजेको कामको प्रकृति अनुसारको टाइटलमा क्लिक गर्नुपर्नेछ ।
Previousसोमवार अष्ट्रेलियन डलरको दरभाउ
Nextकसले मिलाउँदै छन् पारस र हिमानीलाई ?
अष्ट्रेलियामा फिल्म स्टडीज र करियरको अवसर
१४ श्रावण २०७४, शनिबार ०३:१३